Ungafometha kanjani i-iPhone yakho | iPhone News
UMiguel Hernandez | | iPhone, Okokufundisa namanyuwali
I-iPhone yakho, ngaphandle kokuthi iwumkhiqizo onesoftware nehardware ezulazula ngesandla, ayikhululiwe ezinkingeni zobuchwepheshe, njengoba kungenzeka kunoma yimuphi omunye umkhiqizo wezobuchwepheshe onalezi zici, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lomkhiqizo.
Kungakho sifuna ukukufundisa indlela yokufometha i-iPhone yakho ngendlela elula yokuxazulula zonke izinkinga ongase ube nazo. Ngale ndlela, uzokwenza ukufaka "okuhlanzekile" kwesofthiwe yedivayisi yakho futhi ngaleyo ndlela uxazulule noma yiliphi iphutha elidala ukungezwani phakathi kwesofthiwe nehadiwe. Okuwukuphela kwento ozozisola ngayo ukungakufundi lokhu ngokushesha.
1 Kuhlanganisani ukufometha iPhone yakho?
2 Into yokuqala: isipele
3 Ungayibuyisela kanjani i-iPhone yakho ngaphandle kwe-PC
4 Ungafometha kanjani i-iPhone yakho kwi-PC yakho noma i-Mac
5 I-iPhone yami ibonisa i-apula kuphela
Kuhlanganisani ukufometha iPhone yakho?
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi ku-jargon yomhlaba we-Apple ngokuvamile, idivayisi ngeke ifomethwe, kodwa kunalokho izoba. buyisela. Nokho, zingamagama noma izindlela zokubiza izinto ezingaguquli lutho nhlobo. Iqiniso liwukuthi uzofometha i-iPhone yakho, okungukuthi, uzosula i-Operating System futhi uyibuyisele ngokushesha futhi kalula.
Kuyacaca ukuthi isithombe sinenani lamagama ayinkulungwane, yingakho sikushiya ekhanda lalesi sifundo ividiyo evela esiteshini sethu se-YouTube. YouTube nazo zonke izinyathelo.
Into yokuqala: isipele
Kunconywa kakhulu ukuthi uma sibuyisela idivayisi ngoba sinezinkinga zesofthiwe ezithinta ukusebenza kwe-iPhone yethu njengokusetshenziswa kwebhethri ngokweqile, ukuqalisa kabusha, noma izinhlelo zokusebenza ezingasebenzi kahle, ukuthi sigweme ukubuyisela isipele. Kodwa-ke, ngincoma njalo ukuthi senze ikhophi yasenqolobaneni ye-iPhone yethu ngaphambi kokuyibuyisela ngoba kungase kube nolunye uhlobo lolwazi noma uhlelo lokusebenza olunokuqukethwe esingafuni ukulahlekelwa, futhi kungase kuphuze kakhulu.
Kungakho ngincoma ukuthi wenze isipele ngqo kwi-PC noma ku-Mac yakho, usebenzisa ithuluzi. Nakuba indlela esheshayo iwukuba isipele ngokusebenzisa iCloud, mina njalo batusa isipele "esigcwele". kwi-PC noma kwi-Mac yakho.
Uma sesixhume i-iPhone nge-USB futhi ithuluzi selivuliwe, asicindezele inkinobho "Gcina isipele sayo yonke idatha ye-iPhone" kodwa okokuqala sizokhetha inketho "Bethela isipele sendawo", Kulokhu, izosicela iphasiwedi okufanele siyikhumbule futhi isipele se-iPhone yethu sizofaka zonke izinhlobo zolwazi lomuntu siqu njengamaketango okhiye, izithombe, amanothi kanye nokuqukethwe kwangaphakathi kwezinhlelo zokusebenza. Lesi ikhophi yasenqolobaneni engcono kakhulu ongayenza futhi engincoma ukuthi uyigcine njalo.
Ungayibuyisela kanjani i-iPhone yakho ngaphandle kwe-PC
Abasebenzisi abaningi abakwazi, kodwa kukhona ithuba lokubuyisela i-iPhone ngaphandle kokuya ku-Mac yakho noma i-PC yakho, okungukuthi, ukubuyisela i-iPhone ngokuqondile ku-terminal ngokwayo. Kulokhu, into yokuqala okufanele siyenze ukuya kuyo Izilungiselelo ukuze uchofoze inketho yokuqala, lapho i-ID yethu ye-Apple ikhona, sizobe sesikhetha inketho "Funa i" futhi ngaphakathi kwalokhu sizoyivala inketho "Sesha Iphone yami". Ngenkathi i-iPhone itholakala asikwazi ukuyifometha ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi.
Manje singabuyela esigabeni «Izilungiselelo», ukulandela indlela elandelayo: Amasethingi > Okuvamile > Dlulisa noma setha kabusha i-iPhone > Sula okuqukethwe nezilungiselelo.
Ngaphezu kwalolu khetho olushiwo ngaphambilini, okuyilona olusivumela ukuthi sifomethe i-iPhone, sinolunye uchungechunge lwezinye izindlela ezinjengalezi:
Setha kabusha izilungiselelo
Setha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi
Susa zonke izinhlelo zeselula
Setha kabusha isichazamazwi sekhibhodi
setha kabusha isikrini sasekhaya
Setha kabusha indawo nobumfihlo
Nakuba lezi zinketho zokugcina akuzona lezi esizidingayo. Lapho sesamukele inketho ye "Sula okuqukethwe kanye nezilungiselelo" siyaqhubeka ukufometha iPhone yethu.
Ungafometha kanjani i-iPhone yakho kwi-PC yakho noma i-Mac
Inketho engiyithandayo iyona kanye inketho ye-rbuyisela i-iPhone yakho kwi-PC noma i-Mac esemsebenzini, njengoba kukhonjisiwe kuvidiyo engenhla. Manje sizokhetha ukuthi sizofaka yini inguqulo ye-iOS etholakala kumaseva e-Apple, noma leyo esiyilande kumemori ye-PC noma i-Mac yethu.
Uma sifuna ukulanda inguqulo ye-iOS ngaphandle kweyakamuva singaya kumawebhusayithi njengoba iPSW.me lapho sizothola khona zonke izinguqulo, lapho kuzoboniswa khona uma zivumelekile, okungukuthi, zisayinwe yi-Apple. Izinguqulo ezingasasayinwa yi-Apple ngeke zisivumele ukuthi sisebenzise i-iPhone, ngakho-ke kufanele ufake kuphela lezo ezihambisanayo.
Kulokhu, kuzokwanela ngathi ukulanda i-iOS bese ucindezela inkinobho ethi «shift» futhi ngasikhathi sinye negundane enkinobheni. "Buyisela i-iPhone" ngaphakathi kwezinketho ezinikezwa imenyu efanayo lapho senze khona isipele.
Uma, ngokuphambene nalokho, kwanele ngathi ukufaka inguqulo ye-iOS ethintayo, sizocindezela inkinobho kuphela "Buyisela i-iPhone" futhi sizozulazula kumenyu elula. Kodwa-ke, kulesi sigaba i-PC noma i-Mac izoqala ukulanda inguqulo yamanje ye-iOS, ngakho-ke kuye ngokugcwala kwamaseva e-Apple lo msebenzi ungathatha isikhashana, kuzoxhomeka, phakathi kwezinye izinto, ekuxhumekeni kwethu kwe-inthanethi kanye nesivinini salo.
I-iPhone yami ibonisa i-apula kuphela
Esimeni lapho i-iPhone yakho ibe nenkinga enkulu yesofthiwe, ingase ibonise i-apula esikrinini kuphela. Ngalesi sikhathi kumelwe sibeke iPhone kulokho okwaziwa ngokuthi DFU Mode futhi silandele izinyathelo ezishiwo iphuzu odlule.
Ukufaka i-iPhone yakho kumodi ye-DFU uzodinga:
Xhuma i-iPhone kwi-PC noma kwi-Mac ngekhebula bese uqinisekisa ukuthi iyitholile.
Cindezela ivolumu +
Cindezela inkinobho yamandla amasekhondi ayi-10
Ngenkathi uqhubeka nokucindezela inkinobho yamandla, cindezela inkinobho yevolumu- imizuzwana emihlanu
Dedela inkinobho Yamandla bese ubamba inkinobho Yevolumu eminye imizuzwana eyishumi
Futhi lezi yizo zonke izindlela zokubuyisela i-iPhone yakho, njengoba ubona kulula futhi ukhululekile ukuthuthukisa isofthiwe yedivayisi yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungafometha kanjani i-iPhone yakho
Kungani i-iPhone yami ingashaji?